Inothi Elihle Kunazo Zonke Engake Ngazithola Kubhulogi yami | Martech Zone
Inothi Elihamba Phambili Engake Ngalithola kuBlog yami
ULwesihlanu, May 18, 2007 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
I-blog yami ithole ukunakwa okuningi ezinyangeni ezisanda kwedlula futhi abantu bebenomusa ngokweqile ekuphawuleni kwabo. Iqiniso lokuthi abantu bazinika isikhathi sokungincoma noma bangibonge liyamangalisa. Kungishayela impela ukuzama ukufaka umzamo omkhulu kukho konke okuthunyelwe okukodwa. Ngibe namazwana amahle kakhulu selokhu ngiqale ibhulogi, kepha kufanele ngihlanganyele nawe le ncwadi. Kwenze ngokuphelele usuku lwami! Futhi kuyisivumelwano sokuthi ibhulogi ingaba nomthelela ongakanani. Ngaphambi kwaleli nothi, ngangingazi nokuthi uMitch wayengumfundi… bheka inothi lakhe:
Ngingumfundi wesikhathi eside futhi obhalisile kubhulogi yakho. Bengifuna ukudubula kuwe i-imeyili ukuze sikwazise ukuthi ngenzeni.
Mina kanye nomngani, bobabili abafundi abenza izifundo eziphansi eMcGill University eMontreal, eCanada, basanda kwethula inkampani entsha yokuxhasa amakhasimende online. Sisebenzise izimfundiso eziningi ezivela kubhulogi yakho ekuthuthukiseni le nkampani yethu entsha.
Inkampani yethu ibizwa ClixConnect futhi inikezela ngosizo olusha ngokwedlulele lokuhlinzeka ukwesekwa kwamakhasimende online. Esikwenzayo ngokuyisisekelo kunikezela ngosizo lwengxoxo ebukhoma ekhishwe kumawebhusayithi wabantu (kusetshenziswa izinkinobho zokuxoxa bukhoma ozibonayo kumawebhusayithi). Abanikazi bamawebhusayithi bangaphendula imibuzo yezingxoxo uma betholakala, futhi uma bengatholakali, umuntu ovela esikhungweni sethu sezingcingo uzophendula imibuzo abamele yona, 24/7/365.
Leyo yingxenye yezinto ezintsha. Ingxenye enkulu kakhulu ye-ClixConnect ukuthi sinobuchwepheshe obusha kwisoftware yethu eyenza izincomo zokuxoxa ezizenzakalelayo kumakhasimende, ngokuya ngomkhiqizo abawubukayo. Yisho ukuthi umuntu ubheka isikibha esibomvu kuwebhusayithi, iwindi lokuxoxa elizenzakalelayo lingavela lincoma ibhulukwe eliluhlaza okwesibhakabhaka kubo.
Sichithe cishe izinyanga eziyisithupha sihlela lokhu, sasebenza nabantu eCanada, e-US, eRomania nasePakistan ukuyethula.
Bengifuna ukukwazisa ukuthi imininingwane ivuliwe Martech Zone isisizile impela ukuthi sifinyelele lapho sikhona namhlanje, futhi siyakwazisa ngobuqotho.
Ngiyabonga futhi uDouglas!
IMcGill University BCom 2008
Ngijabule ngempela! Yeka incwadi emangalisayo. Angikwazi ukukutshela ukuthi ukufunda lelo nothi kwakusho ukuthini kimi. Sikufisela inhlanhla nge Clixconnect, Mitch! Ngizohlola uhlelo lwakho lokusebenza futhi ngizoqhubeka nokulwela ukukulethela okuqukethwe okusizayo!
Ama-Bow Thrusters, ukubhuloga, nokuxhumana
May 18, 2007 ku-9: 06 AM
Kuhle lokho, ikakhulukazi okuvela kumfundi. Ezinyangeni eziyi-18 ezedlule omunye wabasebenzi bami uye e-Graduate School eYurophu. Uvakashele emasontweni ama-4 edlule wangitshela ukuthi izindlela zebhizinisi le-PR nezamasu engihlanganyele naye emsebenzini lapha, zimnikeze ithuba elinamandla, lokuncintisana phakathi kontanga yakhe. Ngaleso sikhathi, wayengazi nhlobo.
Ngathinteka kakhulu ngoba ungumuntu omuhle futhi uzokwenza izinto eziningi ezinhle empilweni yakhe.
Nginesiqiniseko sokuthi kunabanye abaningi laphaya njengoMitch abanikwe amandla ngomsebenzi wakho.
May 18, 2007 ku-9: 28 AM
Ngiyabonga Neil… imibono nezinhlamvu ezifana nalezi ziyakhuthaza kakhulu kunanoma iyiphi ibhonasi. Kube mnandi impela ukufunda lokhu.
Ingxenye enkulu yebhulogi yami yakhelwe kumazwana, ngakho-ke ngikholwa ukuthi yinothi sonke esingazizwa kamnandi ngalo!
May 19, 2007 ku-6: 34 AM
Ukuxhumana engikuthola ngokuthola imibono kuyingxenye ezuzisa kakhulu yokubhala ibhulogi yami, futhi kuyangisiza ukulwela ukuthola okuqukethwe okungcono futhi okungcono.
Yindaba enhle uDoug, futhi umkhiqizo abeza nawo kungumqondo omuhle, ngingahle ngicabange nokuwusebenzisa ngokuzayo.
Ngokuqinisekile ngisebenzise izincomo zakho eziningi kubhulogi lami futhi manje sengiseduze kwabafundi abangama-200 (ngemuva kwezinyanga ezimbalwa nje) ku-feedburner, futhi lokho kungenxa yakho.
Qhubeka nomsebenzi omuhle,
May 19, 2007 ku-9: 27 AM
I-Opal: I-Vegan Momma
May 21, 2007 ku-6: 34 AM
Ngiyazi ukuthi lokho kukwenze wazizwa umuhle! Amazwana anjalo ahlala ekwenza uzizwe ukhethekile.
Nginabantu abaningi abalahla kubhulogi lami abaningi babo bangithumelela i-imeyili ngezikhathi ezithile futhi ngezikhathi ezithile bayaphuma futhi
"Khuluma" kwesinye isikhathi ukuphawula kwabo kunethonya elikhulu kimi kunalokho okuvela kubafundi bami abajwayelekile ngoba bekungalindelekile nhlobo. 🙂
Ngisanda kuthola iwebhusayithi yakho cishe emizuzwini engamashumi amabili edlule. Sengikufundile okuthunyelwe kwakho okuningana futhi sengikubhukumaka / ngakuxhuma ukuze ngibuye lapho nginesikhathi esithe xaxa.
Bengilokhu ngicabanga ngokujulile ngokuthatha ibhulogi yami ngiyiletha ezingeni elilandelayo nolwazi oluvela kumawebhusayithi, njengolwakho, nakanjani luzongisiza ekwenzeni amaphupho ami abe yiqiniso.
Bengilokhu ngibhuloga isikhathi esingaphezu kweminyaka emibili kodwa, imigomo yami, ezinyangeni ezimbalwa ezedlule iyashintsha.
May 21, 2007 ku-6: 46 AM
Ngiyabonga Vegan Momma! Ngizobe ngibheka nesayithi lakho. Angiyena i-Vegan, kepha nginenhlonipho emangalisayo ngokuzinikezela okudingekayo. Futhi ungumama, umsebenzi onzima kunabo bonke! NginguBaba ongayedwa ngakho ngiyazama (futhi ngiyehluleka) ukugqoka izigqoko zombili.
Ngazise uma ngingakusiza nganoma yini!
May 21, 2007 ku-7: 06 AM
Ngokuqinisekile ngizobe ngibuza imibuzo. Okwamanje angazi ukuthi ngibuze ini! Ukumaketha, ngebhulogi yami, kusesekusha kakhulu kimi. Ngilalele, ngifunda, ngifunde.
Ngingumama ongayedwa futhi ngiyazi ukuthi uqonde ukuthini ngokuzama ukugqoka izigqoko zombili. 🙂